Maldives hadda waa waddanka 128aad ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Maldives » Maldives hadda waa waddanka 128aad ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka
saaciday inay • ICTP • Wararka Raaxada • Wararka Maldives • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Shirkadda Horumarinta Dalxiiska ee Maldives Integrated Tourism (MITDC) ayaa lagu soo dhaweeyey Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) oo ah Xubinta 128aad ee Meel -marinta. Hadafka MITDC waa in la dhexgeliyo dalxiiska ku saleysan bulshada ee Maldives iyo in dalxiiska jasiiradda maxalliga ah la gaarsiiyo meel sare.
The Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC) waa 100% Dowladda Maldivian SOE oo loo xilsaaray inay taageerto oo kobciso horumarka iyo kobcinta qeybta badhtamaha suuqa ee Warshadaha Dalxiiska.
Shirkadda Horumarinta Dalxiiska ee Midaysan ee Maldives sida uu oggolaaday agaasimeheeda Maxamed Raaidh ku soo biirey Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) oo ah Xubintii ugu dambaysay ee Meel -marinta.
Maldives waxay hadda uun ku biirtay Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN), taasoo ka dhigaysa janno dalxiiskan inay noqoto waddankii 128aad ee hoggaamiya ururkan.
Agaasimaha Maxamed Raaidh ayaa marti joogta ah ku ahaa doodo badan oo caalami ah by dib u dhiska.rajo waxaa soo qabanqaabiyay Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
Intii uu hoggaaminayey Mr. Raaidh Shirkadda Horumarinta Dalxiiska ee Maldives Integrated Tourism Corporation hadda waxay si rasmi ah qayb uga tahay dooddan muhiimka ah ee caalamiga ah iyada oo ah xubinta ugu dambaysa ee WTN.
Iyada oo MITDC ay ku biirtay, Jamhuuriyadda Maldives sidoo kale waxay noqotay waddankii 128aad oo xubno ku leh WTN.
Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka Juergen Steinmetz ayaa yiri:
“Maldives waxay neefsataa safarka iyo dalxiiska. Waxaan ku riyaaqay inaan u safro Maldives marar badan 30kii sano ee la soo dhaafay.
“Maldives bilaa qumman waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan iyo meelaha lagu quuso adduunka. Maldives oo leh hudheelo dalxiis oo raaxo leh oo ku faafaya boqolaal jasiiradood ayaa sidoo kale ah meel ku habboon in lagu ilaaliyo fogeynta bulshada marka dib loo bilaabo safarka iyo dalxiiska si ammaan ah.
“Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay ku faraxsan tahay inay la shaqayso MITDC oo ay sii waddo la shaqaynta Maxamed Raaidh. Maxamed horeba waa waji la yaqaan wada -hadalladayada socda.
“Waxaan hadda jecel nahay inaan ku casuunno daneeyayaasha Maldives, hoteellada, meelaha loo dalxiis tago, soo jiidashada, garoomada diyaaradaha inay iyaguna ku soo biiraan shabakadeena.
“WTN waxay noqotay quwad hormuud u ah adduunka safarka & dalxiiska, gaar ahaan kuwa yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee ganacsiga madaxbannaan ee adduunka.
“Ururo badan oo noocan oo kale ah oo ku yaal Maldives ayaa si fiican u metelaya astaantaan. Ku soo dhowow Maldives! ”
The Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC) ayaa sheegay:
Hadafkayaga koowaad waa in aan ummadda u keenno koboc dhaqaale iyada oo la ballaarinayo waddooyinka suurtagalka ah ee waaxda dalxiiska iyada oo loo marayo horumarinta nidaamsan oo qorshaysan ee dalxiiska isku dhafan ee warshadan.
Si loo kala duwo dalxiiska iyo soo-dhoweynta mar walba sii kordheysa ee Maldives, Dowladda Maldivian waxay eegaysay inay sahamiso suurtagalnimada inay gasho suuqa dalxiiska ee heerka dhexe oo hadda ku sii kordhaya Maldives. Iyada oo la raacayo hindisahan, Dawladda Maldivian waxay bilowday horumarinta fikradda dalxiiska isku dhafan ee Maldives.
Maxamed Raaidh, agaasimaha Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC)
Marka la barbardhigo fikraddii hore ee hal-jasiirad-hal-dalxiis oo ay qaateen jameecooyinka hadda jira halkaas oo dhammaan adeegyada ay bixiyaan hal hawlwadeen, waxaan ku talo-jirnaa inaan ka qaybgalno dhowr hawl-wadeenno ganacsi si ay u bixiyaan adeegyo kala duwan sida guryaha martida, xarumaha bulshada, isbaarada, makhaayadaha , isboortiga biyaha, jardiinooyinka mawduuca. Tan waxaa ugu weyn si kor loogu qaado ka -qaybgalka iyo dakhliga ganacsiyada maxalliga ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa mudnaanta noo leh inaan ka qayb -qaadanno ka -qaybgalka bulshada maxalliga ah ee qaybta dalxiiska iyo aasaas ahaan kordhinta dhaqaalaha bulshada.
Ku dadaal si aad u heer sarayso marka aad ka soo baxdo waajibaadkayaga oo aan fududaynno horumar waara ee dalxiiska isku dhafan ee waddanka oo dhan iyada oo la siinayo fursado ganacsi oo hal -abuur leh oo dhaqaale ahaan suurtogal ah si loogu suurtogeliyo ka -qaybgalka SMEs ee warshadaha, iyo in ay noqdaan urur ku dayasho mudan oo ka faa'ideysanaya horumarinta kheyraadka aadanaha iyo lamaanaha istaraatiijiga ah ee qaranka horumarinta dalxiiska.
U dhis barwaaqo bulshada Maldivian iyada oo loo marayo horumarinta dalxiiska ee isku dhafan oo ka dhig dalxiiska maxaliga ah ee Maldivian astaan ​​caalami ah.
Maxamed Raaidh waxaa loo magacaabay Maareeyaha Maareeyaha Horumarinta Dalxiiska ee Maldives Integrated Tourism Corporation (MITDC) iyada oo hadafka koowaad uu yahay in uu gacan ka geysto kobaca dhaqaalaha qaranka iyada oo la ballaarinayo waddooyinka suurtagalka ah ee waaxda dalxiiska iyada oo loo marayo horumarinta nidaamsan oo qorshaysan ee dalxiiska isku dhafan ee warshadan.
Mr. Raaidh wuxuu si toos ah ula shaqeeyay Madaxweynihii hore, Mudane Dr. Maxamed Waheed Xasan, isagoo ah madaxa Shaqaalaha Rasmiga ah ee Degenaanshaha. Khibradiisa baaxadda leh ee waddamada gobolka ASEAN waxay ka dhigaysaa inuu yahay ciyaartoy xooggan oo ku dhex jira shabakadiisa dalxiiska, gaadiidka, iyo warshadaha soo dejinta/dhoofinta.
Intaas waxaa sii dheer, asagoo leh firfircoon xagga fulinta sharciga, ka-hortagga dembiyada iyo dhiirrigelinta sharciga, Maxamed Raaidh wuxuu ku qaatay in ka badan 4 sano si adag u dejinta qaab-dhismeedyada sharciga iyo diyaarinta sharciyo aad u ballaaran.
Aragtidiisu waa inuu dhexgalo dalxiiska ku saleysan bulshada ee Maldives iyo inuu dalxiiska jasiiradda maxalliga ah gaadhsiiyo meel sare.